BaseRussia baye muva nje ngokuvamile zihamba ngemoto. Lokhu kungenxa nje kuphela yokuthi inkampani enkulu noma umkhaya ngakho ushibhile, futhi ngokushesha, kodwa futhi yokuthi abantu bavame ukubona izindawo enhle yezwe. City emikhulu federal axhunyiwe anamagama ezithile. Ngakho, abantu phakathi kwala madolobha Kazan bese Cheboksary umzila E22 siphela. Lesi sihloko uzokutshela malini yebanga lokusuka Kazan ukuba Cheboksary futhi kanjani kusukela komunye umuzi komunye.
Indlela elilungile ukuba bahambe Kazan ukuba Cheboksary - uhambo ngemoto noma ezinye izimoto. Kulokhu omunye izindlela ezimbili ingakhethwa:
Izikhangibavakashi elisogwini oluseningizimu ye esisempumalanga yoMfula iVolga phakathi komuzi Upper Uslon, Tsivilsk futhi Kugesi.
UMzila ngasogwini enyakatho ngokusebenzisa iVolga emzini Krasnogorsk futhi Zelenodolsk.
Kulokhu, ungabiza ekudluliseleni edolobheni uma une isikhathi unesithakazelo futhi sivakashele izindawo enhle, ezikhangayo zamasiko nezomlando. Ngokwesibonelo, e Tsivilsk kukhona amasonto amaningana ukubaluleka yezakhiwo.
E22 umzila, okubandakanya ngowokuqala wemizila ebekwe ngenhla, ifakwe 5 likaphethiloli yokugcwalisa iziteshi inkampani "Lukoil" futhi "Gazprom", kanye amancane wendawo. Ngezinye amagalaji ungayeka ukuphumula, ukudla, ukuthenga noma yini udinga esitolo bese uya ethoyilethi.
I-track "Kazan-Cheboksary", ibanga emotweni lapho uhamba lapho kuyoba mayelana 160 km kanye amahora 2.5-3 endleleni, kuye ngokuthi indlela ekhethiwe (kungabalwa kungenzeka isiminyaminya khimilili, kanye kungekho eyayidla amagalani), kuqukethwe zisesimweni esihle. Uma kudingeka, izinga ukulungiswa kanye nezinsizakalo, ngakho-ke ungaya ku ngaphandle kokwesaba.
Ibanga ukusuka Kazan ukuba Cheboxary ungakwazi ukushayela ibhasi amahora 3.5-4. Amabhasi benomthwalo oqondile wedlula endleleni eya eMoscow nakwamanye amadolobha. Intengo Ticket - ruble 400.
izitimela okuqondile kuvela Kazan ukuze Cheboksary akukho. Kukhona umzila nge ushintsho Kanash, etholakala kakhulu eminye onguthelawayeka eningizimu. Ngenxa yalesi sizathu, isikhathi travel luyanda izikhathi 2, ride kuyodingeka amahora 6-7.
Ibanga kusuka Kazan ukuze Cheboksary indiza kunzima, ngisho emgceni locondzile futhi kuba 122 km, kodwa izindiza ngqo phakathi kwala madolobha womabili lapho. Zikhona ongakhetha kuphela ukudluliswa e Moscow, futhi lokhu kwandisa isikhathi sokuhamba izikhathi 3 noma 5 - kusuka amahora 10 kuya 16. Futhi izindleko indiza enjalo kuyoba eqolo ngaphezu kwanoma uhambo ngemoto noma ngesitimela.
Ticket - indlela yekubeka
Dolzhanskaya ngomzana, "Serfpriyut" (ukuzilibazisa isikhungo): ukubuyekezwa, oxhumana nabo, izithombe
Izikhangibavakashi Orenburg ngedolobha nesifunda
Izinhlamvu design - osemqoka human Iinhlangano
AMC Royal Hotel 5 *, Hurghada: ukubuyekezwa, incazelo ehhotela, amanani
"Sorbeks": yokusetshenziswa, intengo. Indlela "Sorbeks"
Indlela yokupompa imbongolo ekhaya?
Hamba Stels Navigator 630: incazelo imodeli, izici kanye nokubuyekeza
Ukulungiswa isihenqo 4: 3. imphawu letibalulekile
I-asthma bronchial: ukwelashwa, usizo lokuqala uma kwenzeka kuhlasela
Neuroticism - a ... ezingeni neuroticism. Neuroticism ngu Eysenck
Izinganekwane Urban ngemfundo: noma cha kholwa nabo?